I-35 UNDERCUT FADE HAIRCUTS + IINWELE EZENZELWE AMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
I-Undercut Fade iinwele
Eyona Iinwele Zamadoda I-Undercut Fade iinwele
Ukuphela kwe-undercut kuye kwaba yindoda ethandwa kakhulu yokucheba iinwele iminyaka ngoku. Njengomdibaniso wokuphela kunye nokunqunyulwa, ukuphelelwa kukucheba iinwele kwamadoda kubonelela ngokuqhubekayo…
Ukuphela kwe-undercut kuye kwaba yindoda ethandwa kakhulu yokucheba iinwele iminyaka ngoku. Njengomdibaniso we ukubuna kwaye ngaphantsi , ukuphela kweenwele ezisikiweyo zamadoda kubonelela ngokusika okufutshane okujongeka kulungile kokubini mfutshane kwaye iinwele ezinde . Eguqukayo kunye neyala maxesha, abafana banokudibanisa i-undercut kunye nazo zonke iintlobo zokuphela. Nokuba ufuna i-low, mid, high, taper, bald, skin, or drop fade undercut, zininzi iindlela ezipholileyo zangaphantsi zokuphelisa iinwele ukuze ufumane ngoku. Ukunceda amadoda afumane i-hairstyle entsha enesitayile, sidibanisa le mizekelo yeendlela zangaphantsi ezinokuphela. Jonga ezona ndlela ziphambili zokucheba iinwele zizama ukuzama ixesha elizayo xa undwendwela i-barber yakho!
1Eyona Ndoda iphelileyo yokuNqunyulwa kweeNwele
1.2Iinwele ezimfutshane zoMnqamlezo ziyafiphala
1.3Iinwele ezinde eziCofwayo
1.4I-Taper Fade Undercut
1.6Phakathi kweFade Undercut
1.7Ukuphela okuphezulu kwe-Undercut
1.8Isikhumba siphela ngaphantsi
1.9Ukulahla ukuphela kweFayile
1.10I-Bald Fade Undercut
1.11Ikama Ngaphezulu kwe-Undercut Fade
1.12Umkhwa ongaphantsi woKuphela kweNdlela
1.13I-Undercut Fade kunye neNxalenye enzima
1.14Ngaphantsi kweeNwele eziKhohliweyo
MbiniIindidi ze-Undercut Fades
Eyona Ndoda iphelileyo yokuNqunyulwa kweeNwele
Isiphelo esingaphantsi yindlela eyahlukileyo yokusika eyakho amacala kunye umva elifutshane . I-Sleek kunye ne-fresh, i-hairstyles engaphantsi kwe-undercut kulula ukuyifumana, ayifuni nasiphi na isitayile kwaye uhlala ujonge amehlo kwisitayile esipholileyo ngaphezulu.
ukunyuka kwenyanga yokubala
Olu hlobo lokusika lusebenza kunye nayo yonke Iinwele ezilungileyo zamadoda , nokuba ubude beenwele okanye uhlobo. Ngelixa kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo, khetha ifayile ye- unqanyulwe ngaphantsi ngenkangeleko edibeneyo ethe kratya eya kukwenza ugqame.
Iinwele ezimfutshane zoMnqamlezo ziyafiphala
Inwele emfutshane yangaphantsi efipheleyo sisondlo esiphantsi, iinwele ezilula ezisemgangathweni kwaye zihle. Nokuba uyafuna ukusikwa kwe-buzz , abasebenzi abasikiweyo , Umphezulu wezityalo waseFrance , okanye enye iinwele ezimfutshane , I-undercut emfutshane efipheleyo inikezela ngumahluko ogqibeleleyo.
Ukuba unayo ikheli okanye iinwele ezishinyeneyo , Sebenzisa ifayile ye pomade eyomeleleyo ukulawula kunye nesitayile. Kumadoda anefayini okanye ukucheba iinwele , jonga imveliso yesitayile se-matte pomade yento egqityiweyo, yokugqiba kwendalo eya kuthi ibambe umtya wakho.
Iinwele ezinde eziCofwayo
Ngokuqhelekileyo uya kubona i-undercut fade eneenwele ezinde ngaphezulu. Amacala amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu nika ubuninzi bokuguquguquka kwesitayile kunye nokuhamba. Ukuthatha ithuba lokuthambekela kweenwele zamadoda zamva nje, cinga ikama ngaphezulu , yeka, ndibuyele emva , pompadour, ifeksi , mohawk, kunye Izimbo ezimdaka .
Ukuphela kweenwele ezingasasebenziyo ezinde ziya kufuna imveliso eyomeleleyo yesitayile. Ukugqitywa okubhaliweyo okufumana ivolumu kunye nokuhamba, sebenzisa i-wax okanye udongwe. Ngaphandle koko, ukubamba okuphezulu pomade kunokubonelela ngesixa esifanelekileyo sokukhanya kunye nolawulo.
I-Taper Fade Undercut
I-taper fade undercut yindlela emfutshane yokucheba iinwele ezicocekileyo nezicengayo kuwo onke amadoda. Njengolunye lweenwele ezilungileyo kwezeshishini, i-undercut ukuphela kwetaper igcina amacala kunye nomva umfutshane ngaphandle kokuveza isikhumba entloko. Iphela mfutshane, ijongeka njengangoku, kwaye isebenza nazo zonke iintlobo zeenwele, kodwa ikhuselekile eofisini.
I-low fade undercut yenye yeenwele ezijongeka kakhulu kubafana abafuna isitayile esitayile nesipholileyo abanokuyinxiba naphina. Inkqubo ye- ukuphela okuphantsi iqala ngentla kweendlebe kwaye ihlala kufutshane ne-neckline, ngelixa i-undercut ibonelela nje ngomnwe wobukrwada.
Abafana banokwenza i-cuter ibe nesibindi ngokubuza abachebi babo ulusu olusezantsi luphele phantsi emacaleni. Ngokunciphisa ukuya kwi ulusu ye impandla iyaphela , Wongeza inkalipho kodwa inqaku le-chic abasetyhini ebomini bakho baya kulithanda.
Phakathi kweFade Undercut
I-middle fade undercut ibonelela ngebhalansi e-sexy phakathi kokusika okuphantsi kunye nokuphakama okuphezulu. Ikwabizwa ngokuba yi fade eliphakathi undercut, le iinwele ziqala embindini wamacala kwaye zibuyele ngokuchaseneyo okwahlukileyo.
indoda undercut iinwele ezinde
Inkulu kakhulu kubafana abafuna ulutsha, inkalipho kunye nokubukeka kweklasi, awukwazi ukungahambi kakuhle ngolu hlobo lwesitayela se-undercut esiphelile. Ngeenwele eziphakathi ukuya kwezide ngaphezulu, zilungele naliphi na inani lezitayile.
umlawuli weplanethi ye-sagittarius
Ukuphela okuphezulu kwe-Undercut
I-fade undercut ephezulu i-edgy kwaye ihambelana ngendlela emangalisayo. Nokuba ufumana phezulu ulusu luyaphela undercut okanye taper nje amacala, le nwele yesini ibukeka intle nayo mfutshane , Phakathi , kunye iinwele ezinde ngaphezulu.
Zama nge-undercut fade ephezulu kunye nekama ngaphezulu, ubuyile umva, ngomsindo , okanye iinwele ze-mohawk ngenkangeleko ye-badass. Ukuba ufuna isimbo sefashoni esikubonisa ukuba uyinkwenkwe embi, oku kunqamla kokwakho.
Isikhumba siphela ngaphantsi
Isikhumba esingaphantsi kwesikhumba siphela iinwele zenzelwa ukucheba. Oku kunqunyulwa okuphezulu kusebenza kakuhle ngazo zonke iintlobo zokuphela, kwaye kungongezwa kwi phezulu , phakathi, okanye ukuphela okuphantsi.
Ngapha koko, ulusu olucimiweyo olunciphayo unokuba yiyo nantoni na oyifunayo. Ukusuka kwiinwele ezimfutshane ukuya kwezinde, le iinwele zifutshane kakhulu kumacala nangasemva zingathatha nasiphi na isitayile kwinqanaba elilandelayo.
Ukulahla ukuphela kweFayile
I-drop fade undercut yinqumle ekhethekileyo eyongeza ubuhle kuyo nayiphi na imbonakalo. Yala maxesha kwaye i-edgy, i ukulahla ukuphela Iijikelezi zijikeleze amacala emva koko zehle ziye kwi-neckline. Inokuqala phezulu okanye iphantsi, kodwa isitayile sokutyikitya siya kwenza iinwele zakho ezimfutshane emacaleni nakwipop yangasemva.
I-Bald Fade Undercut
Fumana i-bald fade undercut ukuba uthanda iindlela ezimfutshane kakhulu zokucheba iinwele. Enkulu ngeenwele ezimfutshane ngaphezulu, i-bald fade iyadibanisa ngokufanelekileyo iinwele zakho kulusu lwakho. Ukucoceka okucocekileyo nokucocekileyo, i-bald undercut ibonelela ngesiphelo esirhabaxa esinokusinonga isitayile sakho.
Ikama Ngaphezulu kwe-Undercut Fade
I-undercut fade comb on izisa ithuba lokudibana kunye nelakudala. Yongeza indawo elukhuni kwaye ukhulise iindevu ngenkangeleko yobudoda. Emva koko sebenzisa i pomade elungileyo ukubrasha iinwele zakho kwelinye icala yevolumu efanelekileyo kunye nokuhamba. Njengezinwele ezithandwayo, awungekhe uhambe ngokungalunganga kwisitayile Ikama ngaphaya kwamacala aphelileyo .
Umkhwa ongaphantsi woKuphela kweNdlela
Iinwele zangaphantsi ezihlelileyo ebehamba zihamba iminyaka ngoku. Izinwele ezisikiweyo ezingasemva inomdla kwaye ayinangxaki, ke ukuba ufuna ukutshintsha inkangeleko yakho, zama ukubuyela umva phantsi kwe-undercut fade. Amacala aphelileyo anikezela ngolunye uhlobo lwesitayile kunye nobuhle.
I-Undercut Fade kunye neNxalenye eNzima
Ukuze ubhenele kwisini esongezelelweyo, cela umchebi wakho ukuba ongeze icandelo elinzima kwi-undercut fade yakho. Ukuphela kwe-undercut kunye nenxalenye enzima kunika umgca otyhidiweyo ogqithisileyo ozisa ingqalelo kwi-cut cut. Rhoqo zidityaniswe nenxalenye esecaleni okanye ikama ngaphezulu, oku kugqitywa kushushu kuyatshisa kwaye kunesibindi.
Ngaphantsi kweeNwele eziKhohliweyo
Iinwele ezigobileyo ezingaphantsi kwefashoni yindlela entle yokwenza isimbo esingalawulekiyo curls. Amadoda aneenwele ezigobileyo Qonda ukuba kungangumceli mngeni onjani ukudambisa kunye nokulawula ii-curls. I-undercut fade inciphisa amacala kwaye ibuye imfutshane ukunciphisa isitayile kwaye ivumela abafana ukuba bafezekise iintlobo ezahlukeneyo zesitayile Iinwele ezigobileyo ngaphezulu. Tyala imali kwi Ezona mveliso zeenwele zisongiweyo zamadoda ukunciphisa i-frizz, ukuphucula ii-curls, kunye nokujonga okufunayo.
Iindidi ze-Undercut Fades
Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo ze undercuts kwaye iyaphela , abafana abanamkhawulo izimvo zokucheba iinwele kunye neendlela zokwenza isitayile. Ukusuka kufutshane ukuya kubude, ukuphakama ukuya ezantsi, kunye neklasikhi yanamhlanje, thetha nomchebi wakho malunga neendidi ze-undercut fade ezinokusebenza ngcono ngeenwele zakho. Ekugqibeleni, udibanisa ezimbini iinwele ezipholileyo zamadoda Ukujikeleza ukusikwa okugqityiweyo ngokuqinisekileyo kuya kuba kuhle.
iinwele ezinde for guys
amacala amafutshane umphezulu omde
amacala amafutshane umphezulu ophakathi
iinwele ezimfutshane undercut amadoda
yintoni uphawu lwe-chiron yam
Mens iinwele eziphantsi zogcino